श्रीमान कुरुप भन्दै हेन्समसँग सहवास गरी बच्चा जन्माइन्…. « Ok Janata Newsportal
श्रीमान कुरुप भन्दै हेन्समसँग सहवास गरी बच्चा जन्माइन्….
काठमाडौंं । अन्य कुरामा उत्कृष्ट तर बाहिरी आवरणमा ‘कुरूप’ श्रीमानमार्फत् जन्मिने सन्तान भयानक हुने डरले घानाकी एक महिलाले आफ्ना ‘निकै सुन्दर’ पूर्वप्रेमीमार्फत् तीन सन्तान जन्माएकी छिन् ।
उनलाई आफ्नो श्रीमानको सबै कुरा मन पर्दथ्यो तर सन्तान ‘कुरूप’ जन्मने हुन् कि भन्दै उनले जोखिम मोल्न नचाहेको बताइन् । त्यसैले उनले श्रीमानसँग सहवास गरेपछि गर्भनिरोधक औषधी नबिर्सी सेवन गर्थिन् ।
लामो समयसम्म पनि गर्भ नबसेपछि उनका श्रीमानले उनलाई लिएर अस्पताल गए । परीक्षण गर्दा दुवै स्वस्थ थिए, कसैमा पनि केही समस्या थिएन । सो कुरा महिलालाई पहिल्यै थाहा थियो । त्यसैले आफ्ना श्रीमानलाई थप शङ्का गर्ने बाटो नदिन उनले एउटा योजना बनाइन् ।
ती महिलाले यी सबै कुराको जानकारी दिँदै रेडियो स्टेसन हिट्स एफएमलाई पत्र लेखिन् जहाँ उनले उचित सल्लाहको समेत माग गरेकी छिन् ।
ती महिलाको योजनाले निकै राम्रोसँग काम गरिरहेको थियो । उनले तीन राम्रा सन्तान जन्माइसकेकी छिन् । हाल उनी चौथोपटक गर्भवती भएकी छिन् । तर हालै उनका श्रीमानले अमेरिकाको भिसा प्राप्त गरेपछि भने स्थिति थोरै असहज भएको छ । कुनै समयपछि आवेदनकर्ताको परिवारको डीएनए पनि परीक्षण गर्नुपर्ने उनले दाबी गर्दै यसमार्फत् यो घटनाको पर्दाफास हुने कुरामा उनी अत्यन्त चिन्तित भएको पत्रमा लेखेकी छिन् ।
ती महिलाले रेडियो शोकी प्रस्तोतालाई यस्तो स्थितिलाई कसरी राम्रोसँग सम्हाल्न सकिन्छ भनेर सल्लाह मागेकी छिन् ।